Fantaro ny tarehy tsy dia matotra loatra an’i Ahmed Jedou avy any Maoritania · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Jona 2019 20:02 GMT
Ahmed sy ny tenako ary ireo GVers marobe hafa nandritra ilay AB14 tany Amman !!! Ao anatin'ny sary imbetsaka nozarain'ireo mpandray anjara
Efa nanao tafatafa fanadihadiana tamin'i Ahmed Jedou aho na koa antsoina hoe Jedou toy ny tiantsika iantsoana azy, roa taona lasa izay, tamin'ny 2013, rehefa nahazo ny lokan'ny blaogy tsara indrindra amin'ny teny Arabo izy tamin'ny loka Best of Blogs (BoBs) izay nokarakarain'ny Deutsche Welle isan-taona .
Ary noho izany, nanontany tena aho mikasika ny zavatra mety hanontaniako azy na koa hoe inona no mety ho fantatry ny mpamaky bebe kokoa mikasika an'i Jedou-ntsika… Masoivohon'i Maoritania ato amin'ny GV.
I Jedou koa dia anisan'ireo GVers vitsy dia vitsy izay nanoratra lahatsoratra voalohany tamin'ny teny Arabo, ary nadikan'ilay mpanompo kelinareo ho amin'ny teny Anglisy avy eo, izay tsy iza fa ny mpanoratra ity lahatsoratra ity. Toy ny mpandray anjara maro, notononina tany anatin'ireo lahatsoratra sy fanavaozan'ny GV izy talohan'ny nanasan'i Ayesha Saldanha azy hiditra ato amin'ny fianakaviana ary hainareo ny ambiny 🙂
Raha mamaky ny lahatsoratr'i Ahmed ianareo, mety manana hevitra manjavozavo mikasika an'i Maoritania, izay somary marina, fa mikasika ilay mpanoratra ihany koa, ary mety hieritreritra fa miresaka mikasika olana matotra sy mampatory fotsiny izy.
Fa afaka mijoro vavolombelona aho fa manana tarehy hafa i Ahmed, olona mampihomehy kokoa izay fantatro manokana tany Amman nandritra ny Sehatra Fifaneraseran'ireo Blaogera Arabo – #AB14 tamin'ny taona lasa.
Herinandro vitsy lasa izay, raha toa ka sahirana tamin'ny fametrahana Google Hangout izahay … (Ratsy be ny Aterineto any Maoritania sy Libanona ka tena helo izany). Hitako nihanihany sy nihomehy niaraka tamin'ireo zanaka vavin'ny anadahy na ny anabaviny izy.
Tsy maintsy ambarako ihany koa fa mialona an'i Jedou aho noho ny fitiavan-tanindrazany, na eo aza ireo famoretana sy olana any Maoritania avy amin'ny Fanandevozana mankany amin'ny fanavakavahana, didy jadona … sy ny sisa sy ny sisa .. mandà ny hiala izy ary te-hanohy ny hiady ho an'ny fiovana ! Sambatra ianao ry Jedou, matetika aho mahatsapa fa milavo lefona tsy amin'i Libanona irery ihany, fa amin'ny zava-drehetra koa !
Ary manonona azy aho:
“Na sarotra sy fadiranovana aza ny toedraharaha misy, afaka mahita ny tenako ivelan'i Maoritania aho ary mahita izany ho toy ny fitsoahana. Satria tokony ao Maoritania no hiadiana ho an'ny fiovana fa tsy any ivelany. Ary raha toa ka tena azoko tanteraka ireo nanapa-kevitra ny hifindra monina sy hiezaka ny hiaina any ampitan-dranomasina, tsy afaka ny hieritreritra ny tenako ivelan'izany tsotra izao aho.”
Nilaza ihany koa izy fa tsy manenina na inona na inona satria ny filôzôfiany dia ny hoe tsy ilaina ny nenina, tokony haka anatra avy amin'ireo fahadisoantsika isika ary tsy hamerina izany intsony. (mialona indray aho io !!!)
“Mirodana miaraka amin'ny Fitondrana Ara-tafika” hoy i Ahmed nandritra ny AB14 tany Amman tao anatin'ny sary iray nalain'i Amer Sweidan
Raha ny Trondro sy ny vary no sakafo tena tiany indrindra, manambara ihany koa izy fa manana tantaram-pitiavana amin'ny alina sady manaiky ihany fa tena hasarotin'ny torimaso izany fiarahana izany satria indraindray, tiany loatra ny fandrianany raha toa ka amin'ny fotoana hafa, aleony tsy matory.
Nandia tany maro i Jedou, tany amin'ny Fihaonana an-tampony tany Kenya ary ho sambatra be ny sasany aminareo hahita azy any Cebu afaka herinandro vitsivitsy (mialona be aho!!!), saingy milaza izy fa manana fitiavana manokana an'i Ejipta na dia i Alexandria irery aza no notsidihany, saingy nanamarika azy ihany izany.
Ratsy vintana i Jedou rehefa Libanona no resahana satria tsy indray mandeha izy no nasaina hitsidika ny fireneko … tao anatin'izany ny IG MENA vao haingana, nefa tsy nahavita ny nanao izany izy ary noho ny olana vendrana be momba ny visa fotsiny izany (mba lazao mikasika ireny zavatra ireny aho satria tsy afaka nanatrika ny Fihaonana An-tampony tany Kenya noho izany antony vendrana be izany ihany … grrrrrrrr #@&$*!!!) noho ny fananan'i Libanona Masoivoho any Nouakchott sy ny sisa
Ahmed, antenaiko fa hamaky ireny sakana rehetra mikasika ny visa ireny isika indray andro ary hahita anao any amin'ny seranam-piaramanidina any Beiroty ary hanenjika ireo fotoana rehetra very.
Misaotra anao amin'ny maha-namana anao ary misaotra anao manisa ahy ho isan'ireo namanao !